Kaaliyihii dhanka ammaanka ee Trump oo is casilay - BBC Somali
Kaaliyihii dhanka ammaanka ee madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isu casilay xiriirkii uu Ruushka la sameeyay, sida uu shaaciyay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa wakhti aan fogayn sheegay "in uu qiimaynayo" xiriirkii uu kaaliyihiisa dhanka ammaanku la yeeshay danjiraha Ruushka, sida uu sheegay Aqalka Cad.
Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa meel fagaare ah ku diiday eedaymahaas isaga oo u hadlaya Michael Flynn oo ah jeneraal hore oo shaqada ka fariistay.
Image caption Politico ayaa ku waramay in Jared Kushner oo dhanka midig ka muuqda oo ah wiilka uu sodogga u yahay Trump in uu doonayo in uu badalo Michael Flynn oo bidix ka muuqda,
Afhayeenka Aqalka Cad Sean Spicer ayaa galinkii dambe ee Isniintii sheegay "In madaxweynuhu qiimaynayo xaaladda".
Image caption Danjiraha Maraykanka ee Ruushka Sergei Kislyak (midig), oo kula kulmaya madaxweynaha Ruushka Dmitry Medvedev meel u dhaw Mosko sanadkii 2009
Waa maxay aragtida madaxweynuhu?
Trump wali meel fagaare ah kagama uusan hadlin arrintan muranka dhalisay, laakiin Flynn ayay Sabtidii iyo Axaddii isla joogeen Florida.
Flynn ayaa sidoo kale ka soo muuqday safka hore ee shirkii jaraa'id ee madaxweyne Trump iyo ra'iisalwasaaraha Kanada Justin Trudeau ay qabteen Isniintii.
Trump oo labo saxafi siiyay fursad ay su'aalo ku waydiin karaan ayaan su'aaasha Flynn la waydiinin sidaas ayuuna kaga baxsay jahwareerkan taagan.
Afhayeenka Aqalka Cad, Sean Spicer ayaa la waydiiyay in madaxweynuhu uu ogaa in Flynn uu safiirka Ruushka kala hadlay arrimaha xayiraadda, Spicer ayaana yiri "maya, arrintaasina sinaba uma dhici karto".
Image caption My Flynn ayaa sawirkan laga qaaday 2015kii isaga oo la cashaynaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin